आइतबार जुन 20, 2021 |
आइतबार जुन 20, 2021
विषय — के ब्रह्माण्ड, मानिस सहित, आणविक शक्ति द्वारा विकसित भएको छ?
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: हितोपदेश 3: 19
“"परमेश्वरले ज्ञानद्वारा पृथ्वी स्थापना गर्नु भयो, र सम्झ-शक्तिद्वारा आकाश सृजना गर्नु भयो।"”
उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 95: 1-6
1 आऊ, परमप्रभुको गुण-गान गरौं। चट्टान प्रति, ठूलो स्वरमा गुण-गान गरौं जसले हामीलाई बँचायो।
2 परमप्रभु प्रति धन्यवादको गीत गाऊ। उहाँप्रति आनन्दमय प्रशंसाको गीत गाऊ।
3 किन? किनभने परमप्रभु नै महान् परमेश्वर हुनुहुन्छ! अन्य सारा “देवताहरू”लाई अधीनमा राख्ने उहाँ महान् राजा हुनुहुन्छ।
5 सागर उहाँकै हो उहाँले यो सृजना गर्नु भएको हो, परमेश्वरले आफ्नै हातले सुक्खा जमीनहरू बनाउनु भयो।
6 आऊ, निहुँरिएर, उहाँको उपसना गरौं। जसले हामीलाई बनाउनु भयो उहाँ परमेश्वरको उपसना गरौं।
1. भजनसंग्रह 148 : 1-5
1 परमप्रभुको प्रशंसा गर! माथि स्वर्गमा भएका स्वर्गदूतहरू हो। परमप्रभुको प्रशंसा गर।
2 हे सारा स्वर्गदूतहरू हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर! उहाँ र उहाँका सारा सैन्यहरूका प्रशंसा गर!
3 हे सूर्य र चन्द्र, परमप्रभुको प्रशंसा गर। आकाशमा भएका ताराहरू र ज्योतिहरू, उहाँको प्रशंसा गर।
4 हे आकाशका आकाश, परमप्रभुको प्रशंसा गर! आकाशमाथि भएका पानी हो! परमप्रभुको प्रशंसा गर!
5 परमप्रभुको प्रशंसा गर। किन? किनभने परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो अनि सबैको सृजना भयो।
2. यशैया 42 : 5-8
6 म, परमप्रभुले, तिमीलाई मेरो धार्मिकता-अनुसार बोलाएको छु। म तिम्रो हात समाउने छु। अनि म तिम्रो रक्षा गर्नेछु। तिमी त्यस्तो चिन्ह हुनेछौ जसले देखाउँदछ। मानिसहरूसँग मेरो करार भएको। तिमी सारा मानिसहरूका निम्ति प्रज्वलित ज्योति हुनेछौ।
8 म परमप्रभु हुँ, मेरो नाउँ यहोवा हो। मेरो महिमा म अरूलाई दिने छैन्। म झूटा देवताहरूलाई प्रशंसा लैजान दिने छैन जुन मेरो हुनुपर्नेछ।
3. नहेम्याह9: 6
4. मत्ती 11 : 1, 20-30
24 तर तिमीलाई भन्छु कि न्यायको दिनमा सदोमको भन्दा तिम्रो हालत अरू नराम्रो हुनेछ।
25 त्यसपछि येशूले भन्नुभयो, हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु, म तपाईंलाई धन्यवाद चढाउँछु। म तपाईंको प्रशंसा गर्दछु किनकि तपाईंले यी कुराहरू बुद्धिमान र समझदार मानिसहरूबाट लुकाउनुभयो। तर तपाईंले यी तिनीहरूप्रति प्रकट गरिदिनु भयो जो स-साना बालकहरू झैं छन्।
27 मेरा पिताले मलाई सबै व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। पिताले बाहेक अरू कसैले पुत्रलाई चिन्दैन। पुत्रले बाहेक अरू कसैले पितालाई चिन्दैन। अनि पुत्रले जुन मानिसहरूमा पितालाई प्रकट गर्ने इच्छा गर्नहुन्छ तिनीहरूले मात्र पितालाई चिन्ने छन्।
30 हो, मेरो काम ग्रहण गर्न सजिलो छ। तिमीहरूलाई दिइने भार हलका छ।
5. मत्ती 12 : 46-50
47 कुनै एकजनाले भने, तपाईंकी आमा र भाइहरू बाहिर उभिरहेका छन्, अनि तिनीहरू तपाईंसँग भेट गर्न चाहन्छन्।
48 येशूले त्यो मानिसलाई बोल्दै गर्ने मानिसलाई भन्नुभयो, मेरा आमा र मेरा भाइहरू को हुन्?
50 जसले स्वर्गको मेरो पिताले चाहनु भए झैं गर्दछ उनीहरूनै मेरा भाइ, बहिनी र आमा हुन्।
6. यर्मिया 10 : 10 (को)-13
10 ...परमप्रभु चाँहि साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ राजा हुनुहुन्छ जसले सदाकाल शासन चलाउनु हुन्छ। परमेश्वरको रीसमा पृथ्वी काम्छ अनि विदेशीहरूले उहाँको क्रोध सहन सक्तैनन्।
11 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यो सन्देश मानिसहरूमा घोषित गर ‘यी झूटा देवताहरूले आकाश र पृथ्वी बनाएनन। पृथ्वी र आकाश मुनि तिनीहरू लोप हुन्छन्।”‘
12 परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीलाई आफ्नो शक्तिले सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो ज्ञानले संसारलाई रच्नु भयो अनि उहाँले आफ्नो समझ द्वारा आकाशलाई फैलाउनुभयो।
13 उहाँको वचनको आवाजले आकाशमा पानी गर्जन्छ। पृथ्वीको अन्तबाट उहाँले बादल आउने बनाउनु हुन्छ। उहाँले वर्षा सित बिजुली ल्याउनु हुन्छ। उहाँले आफ्नो भण्डारबाट बतास ल्याउनु भयो।
7. प्रकाश4:2(म), 4, 10, 11
2 आत्माले मलाई नियन्त्रणमा लियो। स्वर्गमा मेरो अघि एउटा सिंहासन थियो। त्यस सिंहासनमा कोही बसिरहेका थिए।
11 हाम्रा परमप्रभु अनि परमेश्वर। तपाईंलाई महिमा, सम्मान अनि शक्ति प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ। तपाईंले सबै बस्तुहरु सृष्टि गर्नु भयो। हरेक बस्तुको अस्तित्व छ अनि ती सृष्टि भएका छन् किनभने तपाईंले यस्तो चहानु भएको छ।
8. प्रकाश 14 : 6, 7
7 त्यो स्वर्गदूतले ठूलो आवाजमा भन्यो, परमेश्वरको भय राख अनि उहाँको स्तुति गर। सबै मानिसहरुको न्याय गर्ने परमेश्वरको समय आएको छ। परमेश्वरको उपासना गर। जसले स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र अनि जल श्रोत सृष्टि गरे।
1. 583: 20 (से), 23 (सिद्धान्त)-25
क्रिएटर। ... सिद्धान्त; परमेश्वर, जो सबै बनाइएको थियो र उहाँ आफैंको विपरितले परमाणु वा तत्व सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न।
भगवानले मानिस सहित ब्रह्माण्डको सृष्टि र शासन गर्नुहुन्छ। ब्रह्माण्ड आत्मिक विचारहरूले भरिएको छ, जुन उहाँ विकसित हुनुहुन्छ, र तिनीहरू उनीहरूले दिमागमा आज्ञाकारी छन्। नश्वर दिमागले आध्यात्मिकलाई भौतिकमा परिणत गर्दछ, र त्यसपछि यो त्रुटिको मृत्युबाट बच्नको लागि मानिसको वास्तविक स्वस्थता पुनः प्राप्त गर्दछ। मुर्दाहरू अमर जस्तो हुँदैनन्, भगवानको आफ्नै छविमा बनाइएको; तर असीम आत्मा सबै नै हो, नश्वर चेतना अन्तमा वैज्ञानिक तथ्यको लागि उपज हुनेछ र हराउनेछ, र वास्तविक, पूर्ण र सदासर्वदाको वास्तविक अर्थ प्रकट हुनेछ।
यो सत्य हो र सृष्टिमा त्रुटि एकरूपमा छन् भन्ने गलत हो।
येशूको ईश्वरीय उत्पत्तिले उहाँलाई सृष्टिका तथ्यहरूलाई विस्तृत रूपमा बुझाउन मानव शक्ति भन्दा बढी प्रदान गर्‍यो, र मानव र ब्रह्माण्ड बनाउने र शासन गर्ने एक दिमागको प्रदर्शन गर्न। सृष्टि विज्ञान, येशूको जन्म मा यति स्पष्ट, आफ्नो बुद्धिमत्ता र कम-बुझीएको भनाइहरु लाई प्रेरित गर्‍यो, र यो उहाँको अद्भुत प्रदर्शनको आधार थियो।
येशूले शरीरको कुनै सम्बन्धलाई स्वीकार्नुभयो। उसले भन्यो: "पृथ्वीमा कसैलाई पनि बुबा नबोलाऊ, किनकि स्वर्गमा बस्नुहुने तपाईंको बुबा हुनुहुन्छ।" उनले फेरि सोधे: "मेरी आमा को हुन् र मेरा भाइहरू को हुन्", जसले उनीहरूको बुबाको इच्छा पालन गर्दछन् भन्ने बुझाउँछन्। हामीले उसलाई बुबाको नामबाट बोलाउनु भएको कुनै रेकर्ड छैन। उहाँ आत्मा, भगवान, एक मात्र सृष्टिकर्ता, र यसैले सबैका पिताको रूपमा स्वीकार्नुभयो।
अनन्त दिमागले मानसिक अणुबाट अनन्तसम्म सबैलाई सिर्जना र शासन गर्छ। सबैको ईश्वरीय सिद्धान्तले आफ्नो सृष्टि भर विज्ञान र कलालाई व्यक्त गर्दछ, र मानिस र ब्रह्माण्डको अमरत्व। सृष्टि जहिले पनि देखा पर्दछ, र कहिल्यै यसको अटुट स्रोतको प्रकृतिबाट देखा पर्नु पर्छ। नश्वर भावनाले यो देखापर्दछ र विचारहरू सामग्री कल गर्दछ। यसरी गलत अर्थ लगाईयो भने, ईश्वरीय विचार मानव वा भौतिक विश्वासको स्तरमा खसेजस्तो देखिन्छ, जसलाई नश्वर मान्छे भनिन्छ। तर बीउ आफैमा छ, केवल ईश्वरीय दिमाग मात्र सबैको रूपमा छ र सबैलाई पुनरुत्पादित गर्दछ - किनकि मन गुणक हो, र माइंडको असीम विचार, मानिस र ब्रह्माण्ड, उत्पादन हो। एक विचार, बीज, वा फूलको एक मात्र बुद्धि वा पदार्थ ईश्वर यसको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ।
यसको मृत्युको इतिहासमा, डार्विनको भौतिक आधारबाट विकासको सिद्धान्त अधिकांश सिद्धान्तहरू भन्दा अधिक सुसंगत छ। संक्षिप्तमा, यो डार्विनको सिद्धान्त हो, जुन दिमागले यसको विपरित, पदार्थ र मानिससँगै ब्रह्माण्ड पुन: निर्माण गर्ने शक्तिसँग कुरा गर्छ। भौतिक विकासले संकेत गर्छ कि महान पहिलो कारण भौतिक हुनुपर्दछ, र त्यसपछि या त माइन्डमा फर्कनु पर्छ वा धुलो र केही पनि नहुनुपर्दछ।
धर्मशास्त्र धेरै पवित्र छन्। हाम्रो उद्देश्य उनीहरूलाई आत्मिकरुपमा बुझ्नको लागि हुनुपर्दछ, किनभने यो बुझाइबाट मात्र सत्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। मानिस सहित ब्रह्माण्डको वास्तविक सिद्धान्त भौतिक इतिहासमा होइन तर आध्यात्मिक विकासमा छ। प्रेरित विचार ब्रह्माण्डको एक भौतिक, कामुक, र नश्वर सिद्धान्त त्याग्छ, र आध्यात्मिक र अमर ग्रहण गर्दछ।
आध्यात्मिक विकास एक्लै ईश्वरीय शक्ति प्रयोग गर्न योग्य छ।
भौतिक ज्ञानले अस्तित्वको तथ्यलाई उदांग पार्दैन; तर आध्यात्मिक ज्ञानले मानव चेतनालाई अनन्त सत्यमा उचाल्छ। मानव पापले गर्दा बिस्तारै आध्यात्मिक समझमा बढ्दै जान्छ; सबै कुरा ठीकसँग सिक्न इच्छुक छैन, चर्चजगत्‌लाई सा गलाले बाँध्छ।
जे पनि मन, जीवन, सत्य, र प्रेम प्रतिबिम्बित गर्दछ, आध्यात्मिक रूप मा संकल्प र बाहिर ल्याइएको छ; तर मानिस आत्मिक र भौतिकरूपमा, वा परमेश्वर र मानिस दुबै द्वारा विकसित र विकसित भएको हो भन्ने भनाइले यो अनन्त सत्यको विरोधाभास गर्दछ। उमेरका सबै व्यर्थले यी दुबै गर्भनिरोधहरूलाई सही बनाउन सक्दैन। ईश्वरीय विज्ञानले भ्रमको जरामा कुल्हाडी दिन्छ जुन जीवन, वा दिमाग, भौतिक शरीरले बनाएको हो वा हो, र विज्ञानले अन्ततः सबै भ्रमको आत्म-विनाश र विज्ञानको सुन्दर समझको माध्यमबाट यस भ्रमलाई नष्ट गर्नेछ। जीवन
क्रिश्चियन साइन्सले उल्टो प्रस्तुत गर्दछ, अभिवृद्धि होइन; यसले अणुबाट दिमागमा कुनै भौतिक वृद्धि प्रकट गर्दैन, तर मानिस र ब्रह्माण्डमा ईश्वरीय दिमागको एक संस्कार। अनुपात - मानव पीढी बन्द भए पछि, अनन्त, सामञ्जस्यपूर्ण को अखण्ड लिंकहरू आध्यात्मिक तवरले चिन्न सकिन्छ; र मानिस, पृथ्वीको होइन, तर परमेश्वरसँग मिलेर, देखा पर्नेछ। मानिस र ब्रह्माण्ड आत्माबाट विकसित भएका हो भन्ने वैज्ञानिक तथ्य र आत्मिक पनि ईश्वरीय विज्ञानमा ठिक छ किनकि यसले पाप र रोगको भावनालाई गुमाएपछि मात्र मानिसहरूले स्वास्थ्यको अनुभूति प्राप्त गर्छ भन्ने प्रमाण हुन्छ। मानिस सृष्टिकर्ता हो भनेर विश्वास गर्दै मोर्टल्सले कहिले पनि परमेश्वरको सृष्टि बुझ्न सक्दैन। पहिले नै सृष्टि गरिएका परमेश्वरका बच्चाहरू केवल मानवको सत्यता फेला परेपछि मात्र पहिचान हुनेछन्। यसरी यो छ कि वास्तविक, आदर्श मानिस अनुपातमा देखा पर्दछ झूटो र भौतिक अदृश्य रूपमा। अब विवाह गर्न वा "विवाहमा दिईएको" छैन न त मानिसको निरन्तरतालाई बन्द गर्दछ न त परमेश्वरको असीम योजनामा ​​बढ्दो संख्याको भावनालाई। आत्मिकरुपमा बुझ्नको लागि कि त्यहाँ एक सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, भगवानले, सारा सृष्टि प्रकट गर्नुभयो, धर्मशास्त्रलाई पुष्टि दिनुहुन्छ, कुनै विभाजन, कुनै पीडा, र मानिस मरणशील, सिद्ध र अनन्तको मिठो आश्वासन दिन्छ।
रचनात्मक सिद्धान्त - जीवन, सत्य, र प्रेम - परमेश्वर हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डले भगवान प्रतिबिम्बित गर्दछ। त्यहाँ एक रचनाकार र एक सिर्जना छ। यो सृष्टिमा आध्यात्मिक विचारहरू र उनीहरूको पहिचानको खुलासा हुन्छ, जुन अनन्त दिमागमा अँगालेको छ र सदाका लागि प्रतिबिम्बित हुन्छ। यी विचारहरू असीमदेखि अनन्तसम्मका छन्, र उच्च विचारहरू परमेश्वरका छोराहरू हुन्।